I-Sea Sun Relax-i-villa i-5 min ukuhamba ukuya eGrace Bay
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguNatalia
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uNatalia iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indawo, indawo, indawo! Hlala kule ndawo isanda kulungiswa i-1,650 sq. iinyawo, ibhedi eyi-3, iibhafu ezi-2 zeCaribbean indlu enechibi labucala elikhulu, kufutshane nolwandle, kwindawo edumileyo yaseLeeward gated kwincam esempuma yesiqithi saseProvidenciales, kwiiTurks ezintle naseCaicos.
Indlu yi-450 yeemitha / 4 min. hamba uye kude kolunye lolona lwandle lubalaseleyo emhlabeni (unxweme lwaseGrace Bay luhlala lufumana amanqaku aphezulu kuMcebisi woKhenketho).
Simi kufutshane nolwandle olufihlakeleyo lweSunset, apho uhlaza luxhaphakile, kukho iivillas ezimbalwa ezitofotofo apha naphaya.
Ngumgama ongaphazamisekiyo we-7.5 yeemayile zesanti ecocekileyo yeCaribbean kunye namanzi aluhlaza, akhuselwe ngumqobo we-corral reef, kwaye unokuhamba, ukubaleka okanye ukuqubha ubude bayo bonke. Esi siqithi saziwa njengenye yezona ndawo zibalaseleyo kwi-kiteboarding, singasathethi ke ngokuhamba ngesikhephe, ukuntywila kunye nokuntywila emanzini. Uya kufumana iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezikumgangatho wehlabathi, iindawo zokutyela ezikumgama oziikhilomitha ezi-2 ukuya ngasentshona ezantsi elunxwemeni.
ILeeward yethu yindawo ekhuselekileyo, enobuhlobo kusapho kwaye ikumgangatho ophezulu. Kude kufuphi nendawo ekhangayo yaseBlue Haven kunye ne-marina, i-Big Blue Collective eco tours, uhambo kunye nemidlalo emininzi yamanzi.
Indlu ihleli kwindawo ebiyelwe kwaye ibekwe kakuhle umhlaba oziihektare eziyi-0.2. Ipatio yamachibi ikufuphi negadi engaphambili. I-5 'deep pool-water pool yintsha kraca. Iyadi kunye nepatio ekhuselweyo ngasemva kwindawo eluhlaza eluhlaza, enika iindwendwe zethu ubumfihlo obukhulu.
Ngaphakathi, uya kufumana iisilingi eziphakanyisiweyo, iindawo ezihonjiswe ngoncasa eziqhelekileyo kunye namagumbi okulala, ikhitshi elinezixhobo ezingenanto kunye ne-granite countertops, amagumbi okuhlambela amabini agcweleyo.
Nangona imimoya yorhwebo ikholisa ukupholisa indlu, yonke indawo ine-airconditioning kwaye inefeni yesilingi. Kukho i-intanethi yefiber, iiTV ezimbini ezixhonywe eludongeni ze4K, iwasha, isomisi, kunye nesipholisi samanzi.
Igumbi lokulala elikhulu linebhedi enkulu kunye negumbi lokuhlambela labucala, igumbi lesibini linebhedi enkulu, ngelixa igumbi lesithathu lineebhedi ezimbini ezingamawele. Kukwakho nesofa yokutsala kwigumbi lokuhlala ukuze kubekho undwendwe olongezelelweyo.
Unokucinga ngokuqesha imoto ukuze ujonge esi siqithi sihle. Sinesivumelwano kunye neshishini lendawo elithembekileyo lokurenta iimoto, eliya kuzisa imoto kwindlela yethu yokuqhuba kwaye linokubonelela ngeerhafu ezisezantsi njenge-US$35 ngosuku.
Izitulo zaselwandle ezine, iiambrela ezimbini, kunye neetawuli zaselwandle zibonelelwa simahla. Umphathi wepropathi yethu unokulungiselela naliphi na inani lezihlalo zokuphumla kunye neambrela elunxwemeni ukwenzela umrhumo ongezelelweyo.
Le yipropati yeholide enelayisensi.
Umphathi wepropathi oyingcali uya kufumaneka kwisaziso esifutshane ukuze aphendule imibuzo yakho kwaye ajongane neenkxalabo zakho
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Leeward Settlement